जामका कारण यात्रु यम्बुलेन्स भित्रै मृ* त्यु हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा लगायो कडा नियम, अब काठमाडौं भित्रिने सवारीसाधन नारनघाटमै रोकिने – Life Nepali
जामका कारण यात्रु यम्बुलेन्स भित्रै मृ* त्यु हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा लगायो कडा नियम, अब काठमाडौं भित्रिने सवारीसाधन नारनघाटमै रोकिने
यातायात व्यवस्था विभागले सोमबारदेखि ठूला मालवाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाएको छ। सोमबार १२ गतेदेखि १८ गतेसम्मका लागि १० चक्के र सो भन्दाका माथिका सवारीको आगमनमा रोक लगाइएको हो। त्यस्ता सवारीसाधनहरुलाई चितवनको नारायणघाटमै रोकिने विभागले जनाएको छ। दशैंको मुखमा काठमाडौंको नागढुंगा छिचोलेर गल्छी पुग्न मात्रै सवारीले ८ घण्टा लाग्न थालेपछि यातायात विभागले विकल्प खोजेको छ ।जामका कारण यात्रु यम्बुलेन्स भित्रै मृ त्यु हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यातायात विभाले १२ गतेदेखि १९ गतेसम्म काठमाडौं भित्रिने ठुला मालवहाक सवारीलाई रोक लगाएको छ ।
यस्तै १६ गतेदेखि भने उक्त मालबहाक सवारी साधन बेलुका १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्रै चल्न पाउनेछन् । दशैंका बेला काठमाडौंबाट घर फर्किने यात्रुहरु बाटैमा अलपत्र पर्ने गरेका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा गृहमन्त्रालय र यातायात विभागले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । अति आवश्यक खाद्यान्न सामाग्री, कपडा, औषधि, तरकारी लगायतका सामाग्रीहरु बोकेका सवारीलाई भने भित्रिन पाउने छन्।विभागले दसै‌मा काठमाडौ‌ बाहिर जाने र आउने यात्रुलाई सहज बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो। यस्तै गृहमन्त्रालयले नागढुंगा देखि नौबीसेसम्म ठुलो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरी जाम नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको छ ।
पर्वका बेला यात्रुको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै थप सय जना ट्राफिक प्रहरी र २०० जना नेपाल प्रहरी गरी ३०० जना प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै प्रहरीले नागढुंगा देखि नौबिसेसम्म यदी ओभरटेक गरेको पाइएमा रु ३०० जरिवाना लाग्ने बताएको छ ।काठमाडौं भित्रिने अधिकांश सवारी साधन सामान बोकेर आएका लोड गाडी छन्। सय गाडीमध्ये ९५ वटा ट्रक भेटिन्छ। उकालोमा लोड भएका गाडी फस्ने, गियर जानेजस्ता समस्याहरू देखिँदा लामो समय जाम हुने गरेको प्रहरीको ठम्म्याई छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : काठमाण्डौ जाँदै गर्दा लागेको जामले बस भित्रै आमाको काखमा छोराको नि*धन !
?त्रिभुवन राजपथमा सडक मर्मत तथा ठूला सवारीसाधनले आवागमनमा बाधा पु¥याएपछि भएको जामका कारण आज एक बिरामीको निधन भएको छ । निधन हुनेमा रौतहटको गौर नगरपालिका–७ का ३५ वर्षीय रुपलाल शाह रहेका छन् ।रौतहटबाट काठमाडाँै आउँदै गरेको ना७ख ५३६४ नंको बसमा मिर्गाैला रोगी शाहलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइँदै थियो ।
उनको थाक्रे गाउँपालिका–२ हुलाकडाँडास्थित राजमार्गमा बसभित्र आमाको काखमा निधन भएको महादेवबँेसी प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक बाबुलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । दुवै मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेपछि शाहलाई डायलसिसका लागि सार्वजनिक यातायातमा काठमाडाँै ल्याइँदै थियो ।
लामो जाममा १२ घण्टाभन्दा बढी समय कुर्नु पर्दा बिरामीको निधन भएको महादेवबँेसीस्थित जनजागृति माविका शिक्षक रामचन्द्र रुपाखेतीले बताउनुभयो । एम्बुलेन्समा ल्याउन पैसा अभाव भएपछि शाहलाई रात्रिबस चढाएर ल्याइँदै थियो । शाहको श व बाटोबाटै रौतहट लैजाने तयारी भइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
आमा, भाइ र दाजुसँगै शाह बसमा काठमाडौँ आउँदै थिए । आमासँगै सिटमा बसेका शाहकमे उनको काखमै निधन भएको हो । सडक मर्मत र ठूला सवारीसाधनका कारण झण्डै ३० किलोमिटर क्षेत्रमा जाम लागेको थियो । एम्बुलेन्ससमेत आवतजावत गर्न नसक्नेगरी सडक चार दिनदेखि अवरुद्ध भइरहेको छ । दशैँका लागि घर निस्केका यात्रु बाटोमै अलपत्र छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस : पोखरा र गोरखाका लागि टिकट बुकिङ खुला
दशैँ नजिकिएसँगै पोखरा र गोरखाको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला भएको छ । असोज ५ गतेदेखि लामो दूरीका यात्रुका लागि टिकट बुकिङ खुला भए पनि पोखरा र गोरखाका लागि भने आजदेखि मात्र टिकट बुकिङ खुला गरिएको हो ।
दशैँको टिकट खुला भएसँगै संस्कार समाज नेपालले यात्रुलाई सुरक्षित यात्राका लागि एक हजार सवारीसाधनमा जनचेतनामूलक सामग्रीसहितको पेनड्राइभ वितरण गरेको छ । ‘असल संस्कार सिकौँ सिकाऔँ’, ‘आफ्नो देश आफँै बनाऔँ’ भन्ने मूल लक्ष्यसहित स्थापना भएको संस्कार समाज नेपालले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँगको सहकार्यमा बिहीबारदेखि पेनड्राइभ वितरण गर्न शुरु गरेकोे हो ।संस्कार समाज नेपालका अध्यक्ष पशुपति गुरुङ विगत वर्षमा सुरक्षित यात्राका लागि पर्चा र पम्प्लेट वितरण गरे पनि अभियानले सार्थकता नलिएकाले अहिले पेनड्राइभमार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
अहिले नयाँ बसपार्कबाट छुट्ने एक हजार सवारीसाधनलाई पेनड्राइभ वितरण गरिए पनि आगामी दिनमा देशैभर उक्त अभियान थालिने उहाँ बताउनुहुन्छ । समाजले यसअघि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक जनचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड, हरेक हप्ता सरसफाइ, विद्यालयमा असल संस्कारसम्बन्धी कक्षा सञ्चालन र अनाथ तथा असहायलाई सहयोग गर्दै आएको छ । दशैँ लागेसँगै नयाँ बसपार्कमा दैनिकजसो यात्रुको भीड लाग्ने गरेको छ । दैनिक दुई हजारभन्दा बढी बस नयाँ बसपार्कबाट गुड्ने गरेका छन् ।
नयाँ बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको ल्होत्से बहुउदेश्यीय प्रालिका अध्यक्ष इञ्जिनीयर दीपक कुँवर अभियानले चालक, सहचालक र यात्रुलाई सचेत बनाउने हुँदा दुर्घटनामा समेत कमी आउने बताउनुहुन्छ । चाडपर्वको बेला सुरक्षित यात्रामा अभियानले सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र यातायात व्यवसायीको संयुक्त पहलमा नयाँ बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्षसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । .
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला यात्रुको समस्या समाधानका लागि यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुहुन्छ । यात्रु सहायता कक्ष स्थापनासँगै कहाँ जाने भाडा कति भन्ने स्पष्ट हुने भएकाले यात्रु ठगिनेबाट जोगिने उहाँको भनाइ छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी वृत्त नयाँ बसपार्कका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक मुनेन्द्र थापा दशैँमा यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पठाउन र टिकटमा हुने कालाबजारी रोक्न ट्राफिक प्रहरी लागिरहेको बताउनुहुन्छ । दशैँका टिकट काट्ने हरेक काउन्टरको अगाडि भाडासमेत स्पष्ट रुपमा लेखेर यात्रुले देख्ने ठाउँमा टाँस्न ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
Previous कम्युनिस्टहरु असफल भए : चीनबाट कम्युनिस्टका नेता बोलाएर ‘ट्युशन’ पढ्न थाले पौडेल
Next रवि लामिछानेविरुद्ध हालिएको मु*द्दा खारेज